के काभ्रेमा पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाले भने जस्तै नेकपा (एस) को जमानत नै जफत होला ? (भिडिओ) – मिलिजुली खबर
के काभ्रेमा पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाले भने जस्तै नेकपा (एस) को जमानत नै जफत होला ? (भिडिओ)
पूर्व मन्त्री एवं एमाले काभ्रे ईन्चार्ज गोकुल बाँस्कोटाले हिजो बनेपामा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै काभ्रे जिल्लामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को जमानत नै जफत हुने ठोकुवा गर्नुभयो ।
बाँस्कोटाले भन्नुभएको थियो ‘१, २, ३ जमानत जफत हुन्छ । कोल्याप्स हान्ने हो । बढी औडाहा गर्ने ? बाँस्कोटाको यो भनाईमा निकै बेरसम्म कार्यकर्ताले ताली पड्काई रहे । पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाले कार्यकर्ताको बीच आफु माधव कुमार नेपालसंग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई भाई कांग्रेसको संज्ञा दिँदै नेता बाँस्कोटाले जिल्लामा आफुलाई चुनौती दिन सक्ने त्यो पार्टीको ल्याकत नरहेको समेत जिकीर गर्नुभयो । ‘म उनीहरूको सबै भन्दा ठूलो नेता माधव नेपालसंग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु । काभ्रेली जनताले मलाई साथ दिन्छन् । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा माधव नेपाललाई ल्याउ । चुनाव लडौँ । भाई कांग्रेस पार्टीबाट जो जो चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउँछन् उनीहरू सबैको जमानत जफत हुन्छ, बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र । आफ्नै जन्म थलो, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा समेत एमाले कमजोर रहेको आँकलन भैरहँदा बाँस्कोटाले बास्तविक धरातल अर्कै रहेको दाबी गर्नुभयो । एकदुई जना जाँदैमा सिंगो एमालेनै सिध्यो भन्नु एक पक्षीय हेराई रहेको उहाँको तर्क थियो ।
हिजो बाँस्कोटाका अधिकांश अभिब्यक्ति चुनावी थिए । बाँस्कोटाले प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल र बसुन्धरा हुमागाईलाई आ आफ्नो वडा जितेर देखाउन चुनौती समेत दिन भ्याउनुभयो । यी सबै अभिब्यक्तिले के बताउँथ्यो भने काभ्रे जिल्लामा एमाले फुटको कुनै असर छैन् र चुनावमा पनि पर्दैन ।
कार्यकर्तालाई हौस्याउन नेता र नेतृत्वले बोल्ने त यस्तै होला । तर नेतृत्वले बास्तविक कुरा पनि कार्यकर्तालाई लुकाउनु हुँदैन । के बाँस्कोटाले दाबी गरे जस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सबै उम्मेदवारहरूको जमानत नै जफत हुन्छ त ?
काभ्रेको धरातल बाँस्कोटाले भने जस्तै हो त ? यो कुरामा कत्तिको सत्यता छ ? कतै आगामी निर्वाचनमा आफै असुरक्षित भएर त बाँस्कोटा यी सबै कुरा भनिरहेका छैन् ? नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का
नेताहरू बाँस्कोटाको भनाईमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँछन् ।
हो । एमालेको नवौँ जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीका जम्मा ३ जना मात्रै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएका छन् । तर जिल्लाका पुराना र गोकुल बाँस्कोटाकै गुरूहरू समेत अहिले एमालेमा छैन् । यो कुरालाई बाँस्कोटाले प्राय: कार्यक्रममा ख्याल नै गर्दैनन् । मौका पाउने बित्तिकै गुरू बिर्सछन् । बरू विपक्षी दलको गुणगान गाउछन् । आफ्नैहरूको नेतालाई सत्तोसराप गर्छन् ।
बाँस्कोटालाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउने संविधानसभा सदस्यद्वय कृष्ण प्रसाद सापकोटा र विदुर सापकोटा नै हुन् । तर बाँस्कोटा आफै यो स्थानमा पुगे झै गरी आफ्नो अभिब्यक्ति सार्वजनिक गर्छन् । जुन कुरा नयाँ कार्यकर्तालाई सत्य हो झै लाग्ला । तर पुरानोले पत्याउदैन् ।
एकैछिन मानौं की, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काभ्रेका उम्मेदवारहरूको जमानत नै जफत भयो । यसमा बाँस्कोटा आफै जित्छन् भन्ने ज्ञारेन्टी चाहिँ कसले दिन्छ । बाँस्कोटा २०७४ सालको निर्वाचनमा ५४ हजार ४२७ मत ल्याएर विजयी बनेका थिए । नेपाली कांग्रेसका मधु प्रसाद आचार्यले ३६ हजार ५७२ मत ल्याउनु भएको थियो । बाँस्कोटा बाम गठवन्धनको साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो ।
बाँस्कोटाले भने झै काभ्रेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कमजोर होला । तर बाँस्कोटालाई पराजित गर्न सक्यो भने उनीहरूको विजयी हुनेछ । काभ्रेमा एमाले छोड्ने जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी गोकुल बाँस्कोटाकै निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछ । एक नगरप्रमुख, एक पालिका उपाध्यक्ष सहित दर्जनको हाराहारीमा वडाध्यक्षहरू एमाले छोड्दैछन् । यसको असर चुनावमा प्रष्टै देखिने छ । अहिले बोलेका कुरा बाँस्कोटालाई नै बारी पर्न सक्छ ।
काभ्रेमा ९ जना जनप्रतिनिधिले एमाले छाडे
काभ्रेमा नियन्त्रित लागू औषध सहित ३ जना प क्राउ